Ingcali kwezokhuseleko iyakwazi ukuqhekeza i-AirTag. | Ndisuka mac
Oko ndafunda ukuba iApple yayi ngasemva kweprojekthi yokuqalisa I-AirTag, Bendicinga ukuba iyakuba sisixhobo "esiyingozi" ngandlel 'ithile ngenxa yokukhululeka kwayo ekubeni sikwazi "ukuhlola" kubantu besithathu. Mhlawumbi yiloo nto iApple ithathe ixesha elide ukuyibeka kwintengiso, ikhangela indlela yokuyiphepha ngesoftware.
I-Apple kuye kwafuneka iguqule iOS ukuze i-iPhone ikulumkise ukuba ubeke i "AirTag" yelinye ilizwe efihliweyo emotweni yakho okanye engxoweni yakho. Kodwa ukuba bayakwazi ukuqhekeza i-tracker ukunqanda isilumkiso esinjalo, banokuguqula isitshixo se-Apple sibe yimpimpi enamandla locator zabantu. Sele ziintsuku ezilishumi kuphela ikhutshiwe, kwaye sele igqekeziwe. Ishishini elibi, ke.
Ukuba xa iApple isungula imodeli entsha ye-iPhone, kungekudala emva kokuba sibone iividiyo kwi YouTube Abasebenzisi abenza zonke iintlobo ze "shit", ukubona ukuba "ibambe ntoni", imodeli entsha yonyaka, asinakulindela enye into kwisixhobo esitsha esixabisa i-35 yeeyuro endaweni yewaka elibiza i-iPhone.
Ukuba ukhangela kuYouTube ungabona AirTags idilizwe, yalungiswa njengekhadi letyala, iqabile, yabiliswa njengeqanda elibilisiwe, ithunyelwe ngeposi ukulandela indlela ngeGPS, njl, njl, njl. Kodwa siyifumene ividiyo, engasasebenziyo ehlekisayo, kodwa endaweni yoko "kuyaphazamisa".
Umphandi woKhuseleko waseJamani Ukutshitshiswa kweStack Uthumele ividiyo kwi Twitter apho ibonisa khona ukuba ikwazile njani ukuqhekeza i-AirTag microcontroller kunye nokuguqula izinto zesoftware yokulandela umkhondo yangaphakathi.
Singatsho ukuba ukwazile ukwenza u jailbreak kwi-AirTag kwaye uguqule isoftware yayo yangaphakathi, kwaye utshintshe indlela yokuziphatha kwesixhobo. Umzekelo, umphandi wezokhuseleko wakwazi ukuyiguqula eyakhe I-URL ye-NFC. Kwividiyo, unokubona indlela yokuziphatha kwe-AirTag yoqobo kunye neyakho esele iphulwe.
Ndiyathemba ukuba iApple iyakuthathela ingqalelo kwaye "ingakhusela" ukufikelela kwi firmware Kwisixhobo. Ukuba akukhange kubenjalo, i-AirTag ejele kwintolongo inokuba sisixhobo "esiyingozi" semfihlo sabantu besithathu, abanokuba ngamaxhoba olawulo lwendawo yabo ngaphandle kwemvume yabo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Ingcali kwezokhuseleko iyakwazi ukuqhekeza i-AirTag
UStella Low usekela-mongameli omtsha we-Apple kwezonxibelelwano